देउवाकै चाहनामा रमन निरन्तर -
Home > special_two > देउवाकै चाहनामा रमन निरन्तर
देउवाकै चाहनामा रमन निरन्तर
Palpalkhabar July 29, 2017 July 29, 2017 special_two	0
काठमाडौँ, १४ साउन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिने विगतको प्रचलन यसपटक भंग भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसक्दासमेत उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अझै पदमा बहाल छन् ।
कुनै अदालत र न्यायिक निकायसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने–नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहन्छ । सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत महान्यायाधिवक्ताको रायलाई संविधानले नै अनिवार्य गरेका कारण पनि उक्त पदलाई विशेष महत्वको मान्निछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
नेविसंघ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिव रिमालको निर्देशनमा म.प. विश्वविधालयकाे काठमाँण्डाै कार्यलयमा ताेडफाेड
संसदमा गगन र खगराजको जुहारी: कसले के अाराेप लगाए?
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण: फेरि संसद्मा